Bu'aa bahii dhimmi lammummaa barattootarraan gahe - BBC News Afaan Oromoo
Bu'aa bahii dhimmi lammummaa barattootarraan gahe
Goodayyaa suuraa Barattoonni lammummaa Itoophiyaa hin himatiin hafan Yuunivarsiitiitti hin ramadamne
Barattoonni baay'een guca irratti lamummaa Itoophiyaa hin qabnu jechuun waan guutaniif hanga ammaattu yuunivarsitiitti akka hin ramadamiin ibsamee ture.
Barataa lammii Itoophiyaa miti jedhe guute ramaduuf dirqama hin qabu jedha mootummaan.
"Barataan lamummaa Itoophiyaa hin qabaannee yuunivarsitiiwwan biyyattii keessatti barachuuf mirga hin qabu," jechuun Ejansii Madaalliifi qormaata barnoota biyyaaleesaatti daarektarri komunikeeshinii obbo Radii Shifaa BBC'tti himaniiru.
"Lammii biyyattii ta'usaatiif raga dhiyeefachu qabaata. Lammii biyya biraa yoo ta'e ammo dhalootaan Itoophiyaa ta'usaatiif Ministira Dhimma Alaa irraa xalayaa deegarsaa fidachu qabaata.'' jedhu.
Guca barattootaa kan gutan namoota manneen barnootaatiin ramadamanii fi oggeeyyii odeeffannoo fi teknoloojii waa'ee softiweerii hubatanii yoo ta'u, barattoonnis akka mirkaneeffatan ta'a jedhu.
Barattoonni akkuma qormaata fudhataniin filannoo yuunivarsitii itti ramadamanii fi gosa barnootaa akka guutan taasifamu. Erga qabxii isaanii arganiin boodas filannoo saanii sirreefachuuf mirga qabu.
Yeroo kana hunda dogoggorri yoo jiraate gucicha sirreessuuf carraan kan jiru yoo ta'u, kun hin raawwatamiin hafe yoo ta'e ammo yeroo sadaffaaf komiisaanii dhiyeefachuun akka sirreeffatan taasifamaa jiraachusaa obbo Radiin dubbataniiru.
Goodayyaa suuraa Barattoonni lammummaa isaanii osoo hin guutiin hafan wayita komii dhiyeeffatan
''Ani barattoonni itti yaaduun lammii Itoophiyaa miti jechuun guutuu jedhee hin amanu. Miti jedhanii gutuu isaanitiin mirga isaanii dhabu waan ta'eef,'' jechuunis dhimmichi siyaasaan akka wal hin qabanne dubbatu Obbo Radiin.
Rakkinichis kan dhimma lamummaa qofa osoo hintaane, qaro dhabeeyyii ta'anii osoo jiranii arguun danda'a jechuun yoo guutan, ykn saalaa yoo dogoggoran faayidaa addatti argachu qaban dhabu.
Kun ammo dogogora mataasaanii waan ta'eef yuunivarsiitii filaatan dhabuu danda'u, jechuun dubbataniiru Obbo Radiin.
Barattoonni wayita komii dhiyeeffatan rippoortarri keenya dubbise sababa akkas jedhanii guutaniif gara garaa qabu.
"Dogoggoraanan guute, kanaafis akkan hin ramadamne natti himamee ture. Anis xalayaa dhiifamaa barreessuun imeeliin ergeen ture," jetti godina Guraagee mana barumsaa Walqixxee irraa kan dhufte barattuu Zanabachi Geetachoo.
"Har'a ammo qaamaan dhufee lammii Itophiyaa ta'u koof waraqaa eenyummaa dhiyeessera. Balleessaa koo waan ta'eef, yuunivarsiitii fi gosti barnootaa ani filadhe naaf kennamu dhiisuu mala,'' jetti.
Barataan biraa sababiidhuma wal-fakkaataan osoo hin ramadamin hafe, Yasuf Nuraddiin jedhama. Haatiisaa lammii Xaaliyaan yoo taatu, abbaan isaa nama lammii Itoophiyaati.
"Ani lammiin koo Xaaliyaani dha. Lammii biyya alaa ta'us eeyyama jireenyaa qaba. Kanaaf guca komii na guuchisuun Yuunivarsiitii fi gosa barnootaa barbaadu na filachisaniiru,'' jechuun dubbateera.
Barattoonni dhalootaan Itoophiyaanota ta'an, xalayaa deeggarsaa ministeera dhimma alaa irraa barreessifachuun ni ramadamu.
Rakkoon walfakaataan baruma baraan akka isaan mudatulleen ejansichi himeera.